Progressive Voice Myanmar » Burma Partnership Celebrates Continuing Regional Solidarity for Burma and Embraces the Work Ahead for Progressive Voice
Home Resources Weekly Highlights Burma Partnership Celebrates Continuing Regional Solidarity for Burma ...
Weekly Highlight 477 Views
October 10th, 2016 • Author: By Burma Partnership and Progressive Voice •5minute read
BP’s Working Group Members, which include national solidarity networks from the Philippines, Indonesia, Hong Kong, South Korea, and Japan, regional solidarity networks and Burma’s border-based alliance organizations tirelessly worked to mobilize support for and to amplify the voices of the Burmese democracy movement in the Asia region and internationally. Gus Miclat, Convener of the Asia Pacific Solidarity Coalition (APSOC) and the Free Burma Coalition – Philippines (FBCP), stated, “Given the persistent atrocities committed by the military, many of which are still occurring today, it is imperative that regional friends like us continue to offer our support and solidarity for the struggles faced by the peoples of Burma. And as Burma is now embarking onapath towards democratization, despite the challenges ahead, we have faith in the people and we will continue to stand by our Burmese friends as they continue with the struggle to achieve genuine democracy, freedom, peace and justice. At the same time, while we see the deterioration of fundamental freedoms in other countries in our ASEAN region, we hope that our Burma friends will also join us in our common struggle for the protection of the human rights of peoples and communities in the region.
Speakers at the press conference made their observations on the political changes in Burma since 2011, as well as the shifting civil society landscape inside the country and on the border areas. Khin Ohmar, Coordinator of Burma Partnership, outlined how this has also led to the conclusion of Burma Partnership’s mandate, “The concept of Burma’s democracy movement has transitioned toamore diverse and broader scope, and thus the mandate and work of Burma Partnership to mobilizeacoordinated regional civil society movement withacommon strategy to strive forademocratic and free Burma has also come to an end.
မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့ ၏ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဒေသတွင်းသွေးစည်းညီညွတ်မှု ဆက်လက်တည်ရှိခြင်းအပေါ် ဂုဏ်ပြုခြင်းနှင့် ရှေ့ပြေးအသံ၏ အနာဂတ်လုပ်ငန်းစဉ်အား
ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဟောင်ကောင်၊ တောင်ကိုးရီးယားနှင့် ဂျပန်တို့မှ နိုင်ငံအလိုက် သွေးစည်း ညီညွတ်မှုပြ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့များ၊ ဒေသတွင်း သွေးစည်းညီညွတ်မှုပြကွန်ရက်များနှင့် နယ်စပ်အခြေစိုက် မြန်မာညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့များ ပါဝင်သည့် BP ၏ အလုပ်အဖွဲ့ဝင်များသည် အာရှဒေသတွင်း၌ လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတကာ၌လည်းကောင်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုအတွက် ထောက်ခံ အားပေးမှု စုစည်းနိုင်ရန်နှင့် ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှု၏ အသံများကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန် မမောမပန်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ အာရှ-ပစိဖိတ် သွေးစည်းညီညွတ်ရေးညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ (Asia Pacific Solidarity Coalition – APSOC) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်မြောက်ရေးညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့-ဖိလစ်ပိုင် (Free Burma Coalition-Philippines – FBC-Philippines) တို့ကို ဦးဆောင်သူ ဂတ်စ် မစ်ကလတ်က “စစ်တပ်ရဲ့ တောက်လျှောက်ကျူးလွန်ခဲ့မှုတွေ၊ ဒီနေ့အထိ တော်တော်များများ ဆက်ပြီး ကျူးလွန်နေတာတွေကို ကြည့်ရင် ကျနော်တို့လို ဒေသတွင်းမိတ်ဆွေတွေက မြန်မာပြည်သူတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ အတွက် ထောက်ခံအားပေးမှုတွေ သွေးစည်းညီညွတ်မှုတွေ ဆက်လုပ်ပေးဖို့ အင်မတန် လိုအပ်ပါ တယ်။ အခု မြန်မာနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကို သွားနေပြီဆိုတော့ ရှေ့မှာ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိပေမယ့်လည်း ကျနော်တို့ကတော့ မြန်မာပြည်သူတွေကို ယုံကြည်တယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လွတ်လပ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တရားမျှတရေးတို့ရအောင် ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြရာမှာ ကျနော်တို့က သူတို့နဲ့အတူ ဆက်လက်ရပ်တည်မယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကျနော်တို့ အာဆီယံဒေသထဲက တခြားနိုင်ငံတွေမှာ အခြေခံမူလလွတ်လပ်ခွင့်တွေ ယိုယွင်းပျက်ပြား လာတာ တွေ့နေရတော့ ဒေသတွင်းက ပြည်သူတွေ လူထုအသိုင်းအဝိုင်းတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ ကျနော်တို့ရဲ့ ဘုံတိုက်ပွဲမှာ မြန်မာမိတ်ဆွေတွေလည်း ကျနော်တို့နဲ့ ပူးပေါင်း ပါဝင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟုဆိုသည်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ အမှာစကားပြောကြားသူများက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စခဲ့သည့် နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲများအပေါ် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသလို နိုင်ငံတွင်း၌ လည်းကောင်း၊ နယ်စပ်ဒေသများ၌ လည်းကောင်း၊ အရပ်ဘက် လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၏ အနေအထားပြောင်းလဲလာမှုကိုလည်း သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းအဖြစ်က BP ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့် အဆုံးသတ် ရပ်နားရန် ဦးတည်စေခဲ့ပုံကို BP ၏ တာဝန်ခံ မခင်ဥမ္မာက ယခုလို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ “မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှု ပုံသဏ္ဍန် သဘောသဘာဝဟာ ပိုမိုထွေပြားပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ အဝန်းအဝိုင်းကို ကူးပြောင်းသွားပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီကျပြီး လွတ်လပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ပေါ်ထွန်းရေး ကြိုးပမ်းဖို့ ဒေသတွင်း အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ဗျူဟာမြောက် ဟန်ချက်ညီ လှုပ်ရှားမှုအင်အားကို စုစည်းဖို့ အပ်နှင်းထားတဲ့ BP ရဲ့ တာဝန်နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေလည်း အဆုံးသတ်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။”